Varotra ivelany – taona 2017 : nampiditra 1,150 miliara euros ireo naondrana | NewsMada
Varotra ivelany – taona 2017 : nampiditra 1,150 miliara euros ireo naondrana
Vita, ny 12 jona teo, ny fifamindram-pehefana teo anivon’ny minisiteran’ny Varotra sy ny fanjifana, nifanaovan’ny minisitra teo aloha, i Chabani Nourdine, sy i Yvette Sylla.
Tao anatin’ny tatitra nataon’ny minisitra teo aloha ny tombony azon’i Madagasikara eo amin’ny varotra ivelany, ny taona 2017, nahatratra 1,150 miliara euros ; 600 tapitrisa euros ny tamin’ny fanafarana entana, be indrindra ny vary, nisy 570.000 t, 20 % fanampiny raha ampitahana ny taona 2016.
Tanjona enjehin’ny minisiteran’ny Varotra ny fampitomboana ny varotra ivelany. Ny fomba hampitomboana ny vokatra fanondrana, araka ny drafitrasa ho an’ny taona 2018, nanaovana atrikasa tamin’ny fiandohan’ity taona ity. Nantsoina nandray anjara tamin’izany ireo rehetra tompon’andraikitra any amin’ny faritra, mahalala ny zava-misy any aminy avy.
I Eoropa ihany aloha hatramin’izao ny lohalaharana fanondranana entana avy eto Madagasikara, mampitombo ny vola miditra. 45 % ny miondrana any Eoropa ary 20 % avy any aminy, miditra eto. Tena betsaka amin’ireo aondrana ireo ny vokatry ny jono an-dranomasina, ny lavanila, ny jirofo, ny ylang-ylang, sns, miampy ny vitan’ireo orinasa afakaba. Mifantoka amin’ny APE (Accord de partenariat économique) ny fifanarahana momba ny varotra amin’i Eoropa. Manondrana entana any amin’ny firenen-kafa koa i Madagasikara, toy ny any Sina, any Etazonia, any Inde, sy any Afrika Atsimo.
Mitombo koa izao ny fanondranana kafe, tsaramaso, sy ny vokatry ny fambolena hafa, mahatonga ny tsy fahampian’ny tolotra eto an-toerana, mampiakatra ny vidin’izy ireny ato amin’ny tsena anatiny. Noho izany, ilaina ny hijerena akaiky ny fampitomboana ny vokatry ny fambolena hafa, ankoatra ny vary. Tsy latsaky ny 20.000 Ar izao ny kilaon’ny kafe, raha 8.000 Ar izany roa taona lasa. Olana iray hafa, mihena ny velaran-tany voavoly kafe, noho ny antony maro … Anisan’izany ny toetr’andro sy ny faharatsin-dalana famoaham-bokatra.